Baba Yaga: Terror of the Dark Forest (2020) | MM Movie Store
2020ထှကျ Horror/Supernatural ဇာတျကားကောငျးလေးပါ.ဇာတျလမျးလေးက ရှရှားရိုးရားပုံပွငျတပုဒျကို အခွခေံထားတာပါ။လူ့လောကရဲ့ နယျစပျဖွဈတဲ့ သခွေငျးနဲ့ရှငျခွငျးနယျမွကွေားမှာကလေးတှရေဲ့ ဝိညာဉျကို စားသုံးတဲ့ စုနျးမတဈကောငျ ရှိပါတယျ.
အဲ့ဒီစုနျးမဟာ ကလေးတှကေို Navsလို့ ငှကျတပိုငျးလူတပိုငျးသတ်တဝါကို စလှေတျပွီး ကလေးတှကေို ဖမျးခိုငျးခဲ့ပါတယျ.တနမှေ့ာတော့ သူဖမျးတဲ့ကလေးထဲမှာ တောကျပတဲ့ဝိညာဉျကလေးတဈယောကျပါလာပွီး အဲ့ဒီကလေးကပဲ သူ့ကို သခွေငျးနယျမွမှောအကဉျြးခထြားခဲ့ပါတယျ.
အခြိနျတှကွောလာတာနဲ့ အမြှ လူတှဟော ပုံပွငျကို မလေ့ာခဲ့ကွပမေယျ့တနမှေ့ာတော့ အီဂေါဆိုတဲ့ ကောငျလေးဟာ သူ့ညီမပြောကျသှားတာကိုသတိထားမိပမေယျ့ မိဘတှရေော တခွားလူတှကေပါသူ့ညီမရှိတာကို မကေု့နျကွတာပေ့ါ
ရှာဖှဖေျောထုတျရငျးဒဏ်ဋာရီထဲက အရာတှေ အမှနျရှိပွီး ဘယျလို လှညျ့ကှကျတှဘေယျလို ဒုက်ခပေါငျးစုံကို ရိုကျပွထားပွီး background soundတှကေလဲတကယျ့ကိုထိတျလနျ့စိတျဝငျစားဖှယျအသံတှကေိုထညျ့ထားတာကွောငျ့horrorခဈြသူတို့ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့ဖို့ ညှနျးပရစေ
2020ထွက် Horror/Supernatural ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ.ဇာတ်လမ်းလေးက ရှရှားရိုးရားပုံပြင်တပုဒ်ကို အခြေခံထားတာပါ။လူ့လောကရဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ သေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းနယ်မြေကြားမှာကလေးတွေရဲ့ ဝိညာဉ်ကို စားသုံးတဲ့ စုန်းမတစ်ကောင် ရှိပါတယ်.
အဲ့ဒီစုန်းမဟာ ကလေးတွေကို Navsလို့ ငှက်တပိုင်းလူတပိုင်းသတ္တဝါကို စေလွှတ်ပြီး ကလေးတွေကို ဖမ်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်.တနေ့မှာတော့ သူဖမ်းတဲ့ကလေးထဲမှာ တောက်ပတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးတစ်ယောက်ပါလာပြီး အဲ့ဒီကလေးကပဲ သူ့ကို သေခြင်းနယ်မြေမှာအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်.
အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ လူတွေဟာ ပုံပြင်ကို မေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်တနေ့မှာတော့ အီဂေါဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ညီမပျောက်သွားတာကိုသတိထားမိပေမယ့် မိဘတွေရော တခြားလူတွေကပါသူ့ညီမရှိတာကို မေ့ကုန်ကြတာပေ့ါ
ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရင်းဒဏ္ဋာရီထဲက အရာတွေ အမှန်ရှိပြီး ဘယ်လို လှည့်ကွက်တွေဘယ်လို ဒုက္ခပေါင်းစုံကို ရိုက်ပြထားပြီး background soundတွေကလဲတကယ့်ကိုထိတ်လန့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသံတွေကိုထည့်ထားတာကြောင့်horrorချစ်သူတို့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပရစေ